FUNGICIDES FOR CANAB, SIDA LOO DAWEEYO CUDURRADA DHIRTA - CANAB
Waa maxay daroogada loo isticmaalo beerta canabka ah: fungicides for canab
Marka koraan canab on guriga, waa in la xusuusnaado in ay aad ugu nugul yihiin cudurada iyo cayayaanka marka loo eego noocyo duurjoogta ah. Si looga fogaado yareynta tayada iyo tirada badeecadda koreysa, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo canabta fungicides, kaas oo bixin doona difaac farsamo oo ka dhan ah dhibaatooyinka noocaas ah.
Fungicide for canab "Strobe" waa daroogo gaar ah fasalka. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ay awood u leedahay in ay bixiso dagaal wax ku ool ah noocyada kala duwan ee cudurada fangas. Foomka la sii daayo - granules, oo si fudud loo kala diri karo biyaha, qaybta ugu muhiimsan ee firfircooni waa kresoxim-methyl.
Ku darid fiican ayaa ah in daroogada "Strobe" badbaado for bees, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa xitaa inta lagu jiro ubax dhirta. Sidoo kale, qalabku wuu u adkaysan karaa roobka, taas oo ah, roobka ugu horreeya ee lagu maydho caleemaha ayaan shaqaynayn. Waxaa la aqbali karaa in la isticmaalo "Strobe" iyo heerkulka ku filan (aan ka hooseeyn 3-4 ° C).
Si loo daweeyo daroogada waxay noqon kartaa qolof, madow, dufan, xoqid barar ah iyo kansarka xididka caleemaha. 10 litir oo biyo ah ayaa u baahan doona 5 g oo ah sheyga (1 qaado shaah). Canab waa in lagu buufin karaa xal loo diyaariyay inta lagu jiro geedi socodka oo dhan. Miraha, caleemaha iyo carrada dhulka hoostiisa ah ayaa ku xiran hawlgalka. Xilliga isticmaalka - 2 jeer 7-10 maalmood. Hawlaha ugu dambeeya waa inay ahaadaan ugu dambeyn 30 maalmood ka hor bilowga beerashada canabka.
Fungicide "Strobe" aan toxic ahayn. Qeybahaas ma aysan helin cilmi-baarayaasha midkoodna cawska ama midhaha. Xayawaanka, wakiilka si dhakhso ah ayuu u jajabiyaa, isagoo ku fashilmay inuu dhex galo lakabyada dhulka hoose, taas oo macnaheedu yahay inaysan khatar ku jirin biyaha dhulka. Waxaa jira dhacdooyin dhirta ka soo horjeeda fangasadan. Si looga badbaado tan, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo kahor iyo kadib "Strobe" noocyada kale ee daroogada ee aan la xiriirin qatarta.
Waa muhiim! Sannad gudaheeda, muhiim ma aha in la oggolaado in ka badan 3 daaweyn oo canab ah mid ka mid ah noocyada fungicides.
Inkasta oo aan la isticmaalin daroogada daroogada, weli waa ka mamnuuc in ay u isticmaasho balka ballaaran ama in la cabbo ilaha biyaha. Sababaha amniga, daaweynta waa in la sameeyaa subaxda ama fiidkii si loo abuuro mudo yar kahor intaanay iman goobta beeska.
Daroogadaasi waxay u muuqataa muuqaal ah budo aan ur lahayn. cagaar buluug. Walaxtu waxay awood u leedahay in ay faragaliso geedi socodka muhiimka ah ee sheyga, iyada oo aaney u keenin qabatimid iyo si wax ku ool ah 100% kiisaska.
Cabbirrada ugu weyn ee cusbada chloride copper maaha kuwo halis u ah burbur ku yimaadda qorraxda ama heerkulka sare, laakiin si fudud ayaa loo maydho by roob, taas oo loo baahan yahay in la tixgeliyo markaad dooranayso maalin lagu dayactiro dhirta. Ka hor inta isticmaalka, waa ku filan inaad ku shubto badeecada biyaha, oo waxaad bilaabi kartaa ku buufin beerta canabka ah. Weelka waa inuusan noqon bir birta, taniyo oxychloride copper waxay keeni kartaa birta birta ah.
Maandooriyaha waa in la isticmaalo si buuxda, maaha mid la keydiyo. Cimiladu waa qallalan oo aan lahayn, heerkulku sarreeyo. 20-27 ° C.
Waa muhiim! Aqbali karo 3 inta lagu jiro xiliga xiga.-6 isticmaalka alaabta ee beerta canabka ah. Dambe waa in uu ahaado ugu dambeyn bil ka hor goosashada.
Copper Chloroxide wuxuu leeyahay xadidaad ku jirta codsiga, kuwaas oo loo aasaasay si amaanka bini'aadamka iyo bay'ada.
Gaar ahaan, waxaa mamnuuc ah in alaabta loo isticmaalo agabka biyaha, sababtoo ah waa sun ku ah noocyada kalluunka oo dhan. Nafaqeeyaha naftiisa waa inuu isticmaalaa gacmo gashi, badbaado, muraayado iyo neef-qabe inta lagu guda jiro shaqeynta diyaarinta. Kadib markaad shaqada dhameyso dhammaan dharka waa in la dhaqaa, jidhkuna waa inuu si fiican u dhaqo. Sidoo kale, habka shaqada, carruurta, xayawaanka rabba iyo shimbiraha waa in aan loo oggolaan meel dhow.
"Polyhom" - Fangasiga haysta tallaabo adag oo loola dagaalamo cudurrada boqoshaada. Si fiican uga shaqeeyso xagta uumiga on geedka canabka ah. On sale waxaa lagu soo bandhigaa qaab budada.
Waxyaabaha firfircooni waa oxychloride copper iyo polycarbacin, taas, marka la isku daro, si ka fiican u shaqeeyaan.
Faa'iidooyinka "Polykhom" waxay awoodaan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
laba xubnood oo firfircoon oo bixiya talaabo difaac sare;
oggolaanshaha ah in la fuliyo dhirta warshadaynta xaaladaha cimilada ee kala duwan;
qiimaha hooseeya, taas oo ka dhigaysa xarunta in qof walba heli karo;
Nabadgelyada wanaagsan ee leh dhammaan diyaargarowga, marka laga reebo alkaliin xoog leh, diyaarinta acidic iyo organophosphate, oo ku salaysan saliidaha;
si wanaagsan u saameeya dhalidda canab ah;
Sheyga ma aha sun ku ah bees iyo bumblebees.
Ma taqaanaa? Fungicides waxaa lagu magacaabaa nidaam, kaas oo dhex gali doona gudaha geedka waxaana loo qaybin karaa booska codsiga qaybaha kale iyada oo loo marayo nidaamka xididada, iyada oo la xakameynayo cudurada kala duwan. Waxtarka maaliyadeed ee ka imanaya xaaladaha cimiladu kuma xirna.
Dhirta gacanta "Polyhom " suurtagal inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Codso warshadda leh faleebo. Waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo rubeela, caarada, cagaarshowga, anthracnose iyo cudurrada kale ee geedka canabka ah.
Si aad kaaga caawiso dagaalka ka dhanka ah cudurrada canabkuna sida fungicides sida "Abiga-Peak", "Fundazol", "Hom", "Tiovit Jet", "Phytodoctor", "Thanos", "Oksihom."
Hawlgalka hore u baahan tahay in la fuliyo ka hor ubax bilaabay, inta kale - ka dib caleemaha cusub muuqan on geedka. Fungicide Tani sunta yar. Ma jirto halis ah cayayaanka malab, laakiin waxay weli macno u tahay in buufiyo ka hor inta xagaaga of bees.
Waxyaabaha fitamiinada ee birta ah
Iron-sulfate waa daroogo aan aheyn khatar ku wajahan dadka ama xayawaanka. Waxaa loo isticmaali karaa bacriminta, cayayaanka, jeermis dilaha iyo, dabcan, sida fungicide. Waxay si fiican ula dagaallantaa cayayaanka waxyeellada leh, iyo sidoo kale dirxiga iyo ukunta, waxay si firfircoon uga shaqeeyaan jirooyinka fungal, waxayna sidoo kale ciribtiri karaan yaraanta birta dhirta iyo ciidda. Sulfat kalluunka wuxuu burburiyaa qolofka, caaryada cawl, oidiyum canab, iwm.
Waa muhiim! Inkastoo heerka hoose ee sunta, waa lagama maarmaan in la shaqeeyo daroogada muraayadaha, neefsashada, iyo sidoo kale dharka ilaalinta iyo kabaha si adag u xiran.
Xalka daaweynta canabku waa in la diyaariyaa laga bilaabo 3-4% diirad oo fitamiin. Maalin ayaad u baahan tahay inaad dooratid dabaysha oo qalalan.
Waxaa lagugula talinayaa inaad weydiiso saadaasha hawada, sababtoo ah macdanta birta si sahlan loo maydho roobka hore. Xaaladda marka aysan jirin birta ku filan ee ciidda (iyo for geedka canabka ah, joogitaanka birta waa mid aad u muhiim ah), khasaaro waa la tirtiri karaa by bacarimiso ciidda leh diirad of 0.1-0.2%. Tani waxay qiyaastii 1-2 garaam oo kiimiko ah halkii litir oo biyo ah.
Thanos waa daawo loo yaqaano heerkeeda sarreeya ee iska caabinta marka ay timaaddo.
Filimada aan la dabooli karin waxaa sabab u ah firfircoonida walxaha famoxadonetaas oo ka dib markii codsiga si siman loo qaybiyey dusha sare ee geedka iyo wuxuu ka ilaaliyaa biqilka fangaska fungal.
Cymoxanil awood u leh gali gudaha gudaha caleemaha canab iyo soo saar daaweyn, gudaha gudaha. Dhaqdhaqaaqa wuxuu ka yimaadaa caleen si uu u daboolo iyo macno ahaan maalinta xigta waxay gaareysaa xajmiga ugu sarreeya ee labiska.
Pathogens gudahood dhirta ayaa ku xidhan abuurida nooc ka mid ah kaabayaasha ku wareegsan unugyada waxyeeloobay.
Thanos waa fangas dil ah oo ah tallaabo adag oo ku saabsan tiro cuduro ah. Daawee geedka canabka ah aalad aad u baahan tahay ugu yaraan 3 saacadood ka hor roobka. La ogol yahay in la isticmaalo walxaha kale ee acidic.
"Roob" - Tani waa shey kiimiko ah oo loo isticmaalo beertii canabka ahayd sida fungicide ee ficilka xiriirka. Waxyaabaha firfircoon - Hormarinta.
Foomka lacagta deeqda ah - walxo cad cad, walax aan lahayn. Waxaa sidoo kale ku dhaca qaabka emulsion iyo koollada. Way liidataa biyaha, waxay ku fiican tahay dareeraha kale ee dabiiciga ah.
Isticmaalka canab si loo isticmaalo inta lagu guda jiro xilliga sii kordhaya ee la dagaallanka kalluunka casriga ah iyo oidiyum. Si aad tan u samayso, u diyaariso xal. 0,15%isku dar oo buufin geedka.
Daaweynta kowaad wuxuu dhacaa dhammaadka ubax, ama waqtiga calaamadaha ugu horeeya ee cudurka.
Buufin dheeraad ah ayaa la sameeyaa ka hor xiritaanka ee kooxaha, bilowga habka Bisaylkiisa iyo waqtiga ugu dambeeya iyada oo loo marayo 2-3 toddobaad ka dib markii la xirayo. Daaweynta wadarta guud waa in aysan aheyn wax ka badan afar jeer xilli.
"Roob" wax yar oo sun ah oo ku dhaca noolaha nool. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la raaco tallaabooyin taxadar leh markaad la shaqeyneyso fungicides.
"Ditan" - Xidhiidh nooca fungicides, oo awood u leh in uu ilaaliyo dhirta ka timaadda cudurro ka yimaada waxyeelo leh boqoshaada peronospore iyo phytophthora.
Waxaa laga heli karaa qoynta budada. Walaxda firfircooni waa mancozeb. Hawlgalku waa mid gaar ah, taas oo ka caawisa in laga fogaado muujinta adkeysiga. Saamaynta ilaalinta alaabta waxay socon kartaa ilaa 10 maalmood.
Si loo gaaro waxtarka ugu sarreeya "Ditan" waa in la fiiriyaa xeerar yar:
marka ugu horeysa ee geed canab ah waa in la sameeyaa ka hor inta aan la qaadin;
mudada u dhaxaysa buufinta (8-10 maalmood) waa in si taxadar leh loo kormeero oo la fiiriyaa si looga fogaado garaacid cusub;
ka dib markii dhoobo badani ay hoos u dhaceen ama roobku hoos u dhacay, geedka canabka ah waa in dib loo farsameeyaa, laakiin kaliya ka dib marka caleentiisu gebi ahaan qalajiso;
Daaweynta ka dib, roobabku waa inay maqnaayeen ugu yaraan 5-6 saacadood.
Ma taqaanaa? La xiriir fungicides waa kuwa, marka, dhirta dhirta, ku sii jiri dusha sare iyo baabi'inta pathogen by xiriir toos ah. Muddadii ay soo gaartay wakiillada noocaas ah waxay ku xiran tahay cimilada.
"Zineb" - Waa fungicide protective, taasoo, marka lagu daro daaweynta, ayaa sidoo kale leh hanti ka hortag ah, maadaama ay xannibmi karto abuurista bii'ada waxyeelada leh ee geedka. Si wax ku ool ah ayaa looga shaqeeyaa joojinta cudurrada fangasaha khatarta ah sida dabaysha, xiirta, iwm.
Taas waxaa dheer tan "Zineb" ayaa si muuqata u kordhinaysa dhalidda dhulka, taas oo ahayd mid lagu qiyaasi karo daaweynta. Sidoo kale waa sun ah sunta dadka, xayawaanka iyo shimbiraha.
Waa muhiim! Waxaa si adag loo mamnuucay in lagu beero warshad ku taal aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka kale ee la ilaaliyo.
Si aad u diyaariso xalka waa mid sahlan. Waxay ku filan tahay in lagu nadiifiyo waxyaabaha ku jira baakada (tan waa 40 g) 0.5-0.6 l oo biyo ah. Isku darka waa in si fiican loo kiciyaa, ka dib marka biyaha badan lagu daro si ay u helaan dareeraha shaqada ee diyaar u ah 10 litir.
Si canab pickle u baahan tahay cimilada wanaagsan. Si aad u goosataan waa inay ahaadaan ugu yaraan 30 maalmood.
Wixii fungicides nidaam ah ee tallaabo ilaalinta for canab "Efal-Allett"Waxay ka caawisaa la dagaallanka cudurrada sida perinospora, qolof, dabaylo goosgoos ah, caarada, iwm.
Tallaabada Daroogada iyada oo ku saleysnayd maaddada walaxda geedka iyo dhaqdhaqaaqa xiga ee halkaas. Waxay si xun u saameyn kartaa kobaca fungal fungal iyo xannibo faafitaanka xiga ee cudurka.
Habka loo isticmaalo Fangasiidhkan for canab waa mid caadi ah. Waxaad u baahantahay inaad isku darto 20-30 ml oo badeeco ah oo leh 1 litir oo biyo ah, ka dibna ku dar dheecaan badan oo ganaax, taasoo keenaysa mugga 10 l. Isku dar ah ayaa lagu shubay falejo, iyo geedka canabka ah ayaa la baaraandegay.
Ma taqaanaa? Halabuurka qaybaha nafaqada, oo aan tirinta dufanka, canabka ugu dhow caanaha.
"Mikal" - Fungicide, oo leh labadaba daaweyn iyo badbaadin labadaba. Waxa uu awood u leeyahay in uu burburiyo fangaska fayraska oo uu la dagaallamo cudurrada sida xayrta budada ah, oidiyum, caarad.
Waxaa loo isticmaalaa by bannaanka sida prophylactic ka hor calaamadaha ugu horeeya ee cudurka ay u muuqdaan naftooda. "Mikal" ma ogolaan doonto guuldarada boqoshaada canabkiinna ah iyo ka caawi inay ku soo kabsadaan. Wax ku oolka ah ee la dagaallanka canaaga caanaha, iyo haddii aad ku daraysid daawooyinka kale, dhirta laga yareeyo oidiyum iyo kalluun madow.
Mikal waxaa loo heli karaa sida budada qoyan. Ma aha wax adag in la diyaariyo xal farsamo, waa ku filan in lagu daro 30 g oo budo leh qadar yar oo biyo ah, ka dibna isku dar miisaanka 10 litir.
Wakiilka isku dhafka leh daawooyinka kale waa la oggol yahay, laakiin kaliya haddii aysan dambe u lahayn falcelinta alkalineed. Isticmaal xalka shaqada ka dib diyaarinta. Saamaynta ilaalinta "Mikala" waxay socon doontaa ilaa 2 toddobaad. Xilliga xiliga kama badna 5 dawe oo canab ah ayaa la oggol yahay.
Waa muhiim! Daadi warshadda waa inay ahaataa ugu dambeyn 2-3 maalmood kadib markii calaamadaha ugu horreeya ee cudurka lagu arkay canab.
Daroogadu waxay leedahay sun ugu yareeya noolaha nool. Kalluumaysigu sidoo kale maaha mid khatar ah. Tallaabooyinka daaweynta waxay ku saleysan tahay dhiirigelinta is-difaaca dabiiciga ah ee canabka.
Baro waxqabadyada fungicides sida: "Beddel", "Ordan", "Brunka", "Trichodermin", "Titus", "Fitosporin-M", "Kvadris", "Alirin B."
Mikal wuxuu abuuraa nooc caqabado ah oo ka hortagaya bini'aadamnimada inay dhex galaan gudaha geedka. Cadaadiska looma arko, laakiin "Mikal" oo la isticmaalaayo daawooyin kale ayaa weli lagula talinayaa.
Isku dar ah Bordeaux
Bordeaux isku dar ah - qalab aad u caan ah ee beerta. Waxay ka shaqeysaa jihada cudurada fangas badan ee dhirta, gaar ahaan caarad iyo kallana madow ee canab. Waxaad ka iibsan kartaa daroogada noocan oo kale ah dukaanka beero kasta oo kasta. Diyaarinta dhirta waa in la fuliyaa guga hore kahor dhirta ubaxyada. Feejignaanta waa in la siiyaa kelyaha, taas oo aan weli la kala dirin.
Maaraynta heerkulka hawada sare, iyo sidoo kale qoyaanka qotada dheer laguma talinayo, si aanay u gubin caleemaha. Inta lagu guda jiro habka lagu buufiyo waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in walxaha ay gebi ahaanba daboolaan geedka, haddii kale saameyntana lama gaari doono.
Beer-hawleedka waa in la farsameeyaa Dareeraha Bordeaux, oo ku saleysan isticmaalka 100 g oo fitamiin ah halkii mitir labajibbaaran. m. Sida loogu talagalay xalka dhibaatada, waxay ku xiran tahay tayada ilmagaleenka.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa 1-2% xal Bordeaux - waa 130 g oo lime ah iyo 100 g sulfate copper 10 litir oo biyo ah. Xaaladaha ay isticmaalaan buufinta gacanta, waxaa la kordhin karaa xoogga saarida walxaha shaqada.
Raacitaanka tallaabooyinka taxadarka ah inta lagu jiro shaqada la xallin karo waa qasab. Dharka ka hortagga, madax-guntinta, neefsashada iyo galoofyada - sifooyinka aan loo baahnayn beerta inta lagu guda jiro geedinta. Intaa waxaa dheer, walaxda waa in laga fogaadaa berry iyo khudaarta ku dhow, haddii aad qorshaynaysid inaad soo gurato 2-3 usbuuc ee soo socda.
Waa muhiim! Beerta qaar, iyadoo ujeedadu tahay sii kordhinta u hoggaansamida wakiilka warshadda, ku dar saabuun si loo isku daro. Xaaladdan oo kale waxay ku xirnaan doontaa kiiskan, laakiin dheecaanka shaqeynaya ayaa lumin doona waxtarkeeda.
"Ridomil Gold" waa fangasoofiye nidaamsan oo ganacsi ahaan loo heli karo qaab-warshad biyo ama milix. Maaddooyinka firfircoon waxay kala yihiin mancozeb iyo metalaxyl.
Tilmaamku wuxuu yahay in qaybta labaad ay gasho geedka, sidaas darteed ilaalinta dhammaan qaybaha, iyo qaybta ugu horeysa degaya on dusha sare ee geedka canabka ah. Sababtoo ah ilaalinta laba-geeska ah, guuldarada soo noqnoqda ee warshadda waa laga reebay. Dhibaatada waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa sida ka hortagga iyo daaweynta canab dhanaan. "Ridomil Gold" looma isticmaali karo meel u dhow biyaha, sababtoo ah waxay saameyn ku yeelan kartaa kalluunka. Wardheerta waa in sidoo kale la ilaaliyaa iyadoo la shaqeyneysa neefsashada, gacmo gashi iyo dharka gaarka ah. Iska ilaali inaad xoqdo xal ka shaqeynta carrada.
Kaydinta walxaha shaqeyntu ma aha maadi. Waxa loo baahan yahay in lagu shaqeeyo xaaladaha cimilada iyo cimilada. Waqtiga ugu fiicani waa subaxda ama fiidka marka kulaylku ka yimaado.
Looma baahna in laga baqo in roobku dhaco maalinta xigta, maadaama maaddadu ay gasho nudaha canabka 30 daqiiqo horeba. Natiijada ka dhalatey waxqabadka, filim difaac ah ayaa lagu sameeyaa dusha sare ee caleemaha, taas oo u adkaysata qoyaanka. Isku xoqidda canab ee cimilada qalalan waa in lagu celiyaa mar kasta 15-20 maalmood, roobka - hal mar 8-10 maalmood. Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, geedka waxaa la shaqeeyaa 2-3 jeer, ma dheeraad ah.
Saameynta ugu fiican ayaa la gaari karaa marka la isticmaalayo "Ridomil Gold" laga bilaabo muuqaalka sprouts ka hor ubaxyada dhaqanka, taas oo ah, inta lagu guda jiro muddada marka cagaarnaanta caleemaha ayaa kacsan.
Ma taqaanaa? Marka loo eego tirakoobyada, wadamada Europe ee khamriga la sharfay, heerka cudurrada dareenka ayaa aad uga hooseeya marka loo eego dalalka kale.
Si aad u diyaariso xalka u shaqeynta si aad u nadiifisid fiilada taangiga. Qadar yar oo biyo ah ayaa lagu shubaa weelka, ka dib marka uu wakiilku ku shubo halkaa. "Ridomil Gold".
Si loo gaaro heerka sare ee waxtarka, waa lagama maarmaan in laysku daro walxaha si fiican, ka dibna ku dar biyo badan oo xal u keena mugga loo baahan yahay.
Tiovit Jet for canab waa loo yaqaan heerkeeda sare ee waxtarka. Si fiican u soo kordha la dagaallanka oidiyada. Unugga firfircooni waa baaruud. Daroogada waxaa lagu iibiyaa qaabka granules. Hal kabuuc ahaan, caadi ahaan qiyaastii 800 g oo ah sheyga.
Mabda'a dhaq-dhaqaaqa daroogada "TIOVIT Jet" been ah xaqiiqda ah in ka dib markii xalinta shaqada ka gaarto canab, sulfur la sii daayo oo wax ka qabta unugyada pathogenic, iyaga oo si buuxda u baabi'iyay iyaga oo dhami saacado yar gudahood.
Daadi dhirta aad u baahan tahay cimilada diiran oo qallalan. Haddii heerkulku hooseeyo, sulfur ma uumi baxayso, iyadoo natiijada aysan suurtagal ahayn in lagu gaaro saameynta la rabay.
Isticmaalka daroogada dhaqaale ahaan. 10 litir oo biyo ah ku filan 30-80 g oo ah walax. Waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo qaso badeecada qadar yar oo biyo ah, ka dibna isku dar miisaanka loo baahan yahay.
"Tiovit Jet" waxaa loo isticmaali karaa dalagyada sida: qajaarka, yaanyada, shubanka, zucchini, tufaaxa, pear, miro yar, currants.
Waa in la sameeyaa subaxdii. Inta lagu jiro xilliga, wax ka badan 5 isticmaalka daroogada "Tiovit Jet" waa la oggol yahay. Walaxda waxay bilaabmeysaa inay ku shaqeyso 2 saacadood gudahood daaweynta ka dib.
"Skor" waa hab nidaamsan oo la xiriirta fungicide kaas oo loogu talagalay daaweynta iyo ka hortagga dhowr cudur oo geedka canabka ah. Kuwaas waxaa ka mid ah: fomopsis, kallana madow, oidiyum, rubella. Fasax sii-deyn - emulsion dareere ah, oo lagu meeleeyo ampoules ama weelal.
Waa muhiim! Xaaladaha ay jirroyinku horay u bilaabeen inay sameeyaan dhirirada canabku ay waxyeeleeyeen, qalabka "Skor" ma noqon doono mid wax ku ool ah.
Ka dib marka dhirta lagu daaweeyo daroogada, 2 saacadood ka dib maaddo ayaa geli doonta unugyada waxayna bilaabaan inay ku faafaan geedka oo dhan, iyaga oo xannibaya koritaanka unugyada kansarka.
Xaqiiqo xiiso leh ayaa ah in tallaabada qalabka aysan ku xirnayn dabaysha, kulaylka iyo roobabka. Isla mar ahaantaana heerkulka ugu fiican ee shaqada - 14-25 ° C.
Haddii aad daawada u isticmaashid daawo, ka dibna laba buufin ka hor bilawga dhirta ubaxyada iyo laba kale - ka dib dhammaadka.
Si loo daweeyo cudurrada, canab waa in si degdeg ah loo baari karaa ka dib marka uu bilawga calaamadaha. Wadarta fasaxa loo ogol yahay wax ka badan 4 daaweyn.
Si loola shaqeeyo canab, xalka waxaa la diyaariyaa heerka 5 ml 10 ml oo biyo ah. Isticmaalka isku darka shaqada - 10 litir 100 mitir oo labajibbaaran. m (aan ka badnayn 1 l halkii baadiyaha). Biyaha waa in aan loo isticmaalin qabow, laakiin ma kulul. Heerkulka ugu fiican waa 25 ° C.
Daroogadu waa suntan sunta ah ee aadanaha, ma aha dhammaan sunta shimbiraha. Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo isticmaalka wakiilka agabka biyaha. Jirka, marin-haweedka iyo jirka markaad la shaqaynayso "Dhawaan" waa in la ilaaliyaa.
Noocyo badan oo ah nooca fungicides waxeey keeni karaan jahwareer gaaban oo bilawga bilawga ah. Xaqiiqdii, macluumaad badan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doorato doorashada saxda ah ee badeecooyin dhowr ah oo ku habboon beeraha canabka ah iyo leeyihiin jawaab celinta ugu wanaagsan ee beerta, ka dibna wax dhibaato ah kuma yeelan doonaan isticmaalkooda.